1.27mm vehivavy mpampitohy lohateny
Andian-tsarimihetsika: andian-tsarimihetsika, Connector plate-to-plate
Nomery Pin: 2 * 2-2 * 50P
Famaritana: Double Platen, patch platen, patch platen, SMT platen
fitaovana: PA6T PA9T LCP
MATERIALY COPPER: varahina, varahina phosphor
fitsaboana eto ambonin'ny tany: Plating vita amin'ny firavaka, rakotra volamena
naoty afo: UL94V0
fonosana: Coil, fantsona
habe takiana: azo namboarina mifanaraka amin'ny haben'ny mpanjifa takiana
Fifaninanana manan-danja avy amin'i Atom
Kalitaon'ny vokatra 1.Competitive - manomboka amin'ny fitaovana tonga hatramin'ny famoahana vokatra farany, ny fitaovana fanaraha-maso adozen dia niasa niaraka tamin'ny fitaovana fanaraha-maso avo lenta.
2.Fanamarinana feno-nohamarinin'ny ISO9001, UL ary ROHS nandritra ny taona maro.
3.Mora sy haingana mitarika fotoana: Miaraka amin'ny fitantanana tahiry fitaovana lehibe sy ny fahombiazan'ny famokarana avo lenta amin'ny famokarana mandeha ho azy, afaka manome antoka ny fotoana fitarihana ankapobeny mandritra ny 15 andro isika.
4. Fahombiazan'ny vidiny mifanentana: Loharano fitaovana mifaninana sy fitantanana famokarana mahia mba hanohanana ny fahombiazan'ny vidiny lehibe.
5. Fahaiza-manao R & D mifanentana: Miaraka amin'ny loharanom-pahalalana injeniera manana traikefa sy fahaiza-manao famokarana lehibe, dia namokatra vokatra mihoatra ny zato mahery izahay.
6. Modely vokatra be dia be: manana andiana vokatra am-polony amina maodely vokatra mihoatra ny an'arivony izahay.
Mpanjifa malaza maro no manara-maso ny orinasanay, ary miara-miasa aminay mandritra ny taona maro .Koa ny Jabil, foxconn, Xiaomi, Flextronics sns.
Andininy fandefasana: misafidy orinasan-tseranana iraisam-pirenena DHL / UPS / FEDEX / TNT izahay handefasana ny entana. Azontsika atao ihany koa ny mandefa ny entana any amin'ny masoivohon'ny mpandefa anao.
Antoka Quanlity: 12 volana. Faly izahay manome ny mpanjifanay serivisy tena tsara. Raha ianao
Ny firafitry ny vokatra dia Trano, akorandriaka, terminal ary lohataona, hidin-trano.Ny akora plastika rehetra dia nafarana avy any Japon, ary mampiasa akora izahay hiantohana ny kalitaon'ny entana.
Fampandrosoana fitaovana: Afaka nanamboatra fitaovana ho an'ny mpanjifa izahay raha ilaina izany, mazàna ny fotoana itarihana dia manodidina ny 30 andro fiasana, aorian'ny fitsapana ny santionany amin'ny mpanjifa dia hanao famokarana mpanamory fiaramanidina isika. .
Ny mpanjifa lehibe dia avy any Eropa, asia atsimo ary tsena anatiny. Mazàna ny sasany amin'ny vokatray dia miaraka amin'ny sary famantarana ATOM, raha tsy mila ianao dia afaka mampahafantatra anay mialoha, raha mila ny sary famantarana anao manokana ianao dia afaka manamboatra anao koa izahay.
Naoty ankehitriny 1A
Fanoherana insulator 1000megohms min
Tsy mahazaka diélectrique AC 500V
Insulator fitaovana PA6T UL94V-0
Fitaovana ifandraisana varahina
Temp miasa -55 ℃ ~ ＋ 105 ℃
Temp fanodinana Max 260 ℃ mandritra ny 5 ~ 10 segondra
voapetaka Gold 1u ”
Naoty 1A ankehitriny
Insulator fanoherana 1000megohms min
Diélectric misy AC 500V
Mifandraisa varahina ara-nofo
Temp -55 miasa ℃ ~ ＋ 105
Max fanodinana temp 260 ℃ mandritra ny 5 ~ 10 segondra
plating volamena 1u ”
Standard fonosana 1000 pcs
Fotoana fitarihana 2-4 herinandro
● Mpanamboatra izahay, miaraka amin'ny traikefa 20 taona eo amin'ny sehatry ny mpampitohy elektronika, misy mpiasa 500 eo ho eo ao amin'ny orinasa misy anay izao. Ny orinasa misy anay dia miorina ao amin'ny tanànan'ny China any shhen.
● Avy amin'ny famolavolana ny vokatra, - tooling-- tsindrona - Punching - Plating - Assembly - QC Inspection-Packing - Fandefasana, nahavita ny dingana rehetra tao amin'ny ozininay izahay afa-tsy ny plating .Koa afaka mifehy tsara ny kalitaon'ny entana izahay. afaka manamboatra vokatra manokana ho an'ny mpanjifa ihany koa.
● Valio haingana. Avy amin'ny olona mpivarotra ka hatramin'ny injeniera QC sy R&D, raha manana olana ny mpanjifa dia afaka mamaly ny mpanjifa isika amin'ny voalohany.
● Vokatra isan-karazany: mpampifandray karatra / FPC Connectors / mpampifandray Usb / tariby ampifandraisina amin'ny board / board amin'ny connectors board / mpampifandray HDMI / RF connectors / mpampifandray bateria ...
● Mpanjifa malaza maro no manara-maso ny orinasanay, ary miara-miasa aminay mandritra ny taona maro .Ny Jabil, foxconn, Xiaomi, Flextronics sns.
Andininy fonosana: Ny vokatra dia feno fonosana roulement & tape, miaraka amina fonosana banga, fonosana ivelany dia ao anaty baoritra.
Andininy fandefasana:Misafidy orinasa fandefasana entana iraisam-pirenena DHL / UPS / FEDEX / TNT handefa ny entana izahay. Azontsika atao ihany koa ny mandefa ny entana any amin'ny masoivohon'ny mpandefa anao.
Antoka Quanlity:12 volana. Faly izahay manome ny mpanjifanay serivisy tena tsara. Raha manana fanontaniana ianao dia mifandraisa aminay malalaka!
Teo aloha: MINI RF IH = 1.75mm SMT Volontany namboarina ho an'ny fitaovana fifandraisana
Manaraka: 2.0mm mpampitohy lohan-doha
Header Vehivavy Connector